मोटरसाइकल दुर्घटनामा दुईको मृत्यु, एक गम्भीर : RajdhaniDaily.com -
पतौरा मन्दिरलाई विश्व सम्पदामा सुचिकृत गराएरै छाड्ने मेयर साहको संकल्प
गौर । मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रीनाकुमारी साहले पतौराको पुरातात्वकि महादेव मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सुचीमा सुचिकृत गराउने बताएकी छिन् । ऐतिहासिक एवम् पुरातात्विक महत्व बोकेको पुरातात्विक...
दाहाल संसदीय दलको नेता चयन
काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० संसदीय दलको बैठकले पार्टी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’लार्ई संसदीय दलको नेता चयन गरेको...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दका उपस्थितिमा दुवै पक्षबीच बिहीबार भएको सहमतिमा आज हस्ताक्षर भएको छ । सहमतिपत्रमा...
तालबाराही मन्दिरमा प्रभु बैंकको क्यूआर कोड
पोखरा । प्रभु बैंक लिमिटेडले ताल बाराही मन्दिर गुठी ब्यवस्थापन समितिलाई क्यूआर कोड हस्तान्तरण गरेको छ ।फेवातालको बीचमा रहेको बाराही मन्दिरमा आज शुक्रबार एक...
काठमाडौं । सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गर्ने उद्देश्यले बहराइन अधिराज्यका राजपरिवारका एक सदस्यसहित १६ को टोली नेपाल आउने भएको छ । बहराइनका लागि नेपाली दूतावासले...
महासचिव नेत्रविक्रम चन्द नवलपुरबाट काठमाडौं प्रस्थान
नवलपरासी । सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेसँगै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द सार्वजनिक भएका छन् । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) नवलपुरको दलदलेबाट उनी आज शुक्रबार बिहान...
महेश्वर गौतम - March 5, 2021 0
काठमाडौं । आफूमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवासँगै विप्लव समूहले खुला राजनीतिमा प्रवेश पाएको छ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको दलले बिहीबार ‘खुला रूपमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने’...
राजधानी समाचारदाता - March 4, 2021 0
काठमाडौं । झापा जिल्लास्थित कनकाई नगरपालिका वडा ३ निवासी घर नजिकैका छिमेकी नेत्र प्रसाद तिम्सिनाबाट २०७० असोज १५ गते बलात्कृत भएकी पीडित कृष्णमाया उप्रेतीले...
पश्चिमी वायुको प्रभावले पहाडी भेगमा हल्का वर्षाको सम्भावना
काठमाडाैं । पश्चिमी वायुको प्रभावले आज देशको पहाडी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्का वर्षा हुने सम्भावना रहेकाे छ । पश्चिमी वायुको आंशिक...
रासस - March 4, 2021 0
गलकोट । बागलुङ जिल्लामा बर्सेनि सम्बन्धविच्छेदका घटना बढ्दै गएको छ । जिल्ला अदालत बागलुङमा परेका मुद्दा र फैसलाको तथ्याङ्कअनुसार सम्बन्धविच्छेद पछिल्लो समय बढ्दो क्रममा देखिएको...
अशोक घिमिरे - March 3, 2021 0
काठमाडौं । दुई वर्ष अगाडि नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम समझदारीले प्रत्याभूत गरेको नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विषय ढिलै भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छ...
Home प्रदेश प्रदेश १ मोटरसाइकल दुर्घटनामा दुईको मृत्यु, एक गम्भीर
मोटरसाइकल दुर्घटनामा दुईको मृत्यु, एक गम्भीर
राजविराज । तीन जना चढेर साथीको बिवाहमा जाँदै गरेको मोटरसाइकल दुर्घटनामा पर्दा बिहीबार बिहान २ जनाको ज्यान गएको छ । दुर्घटनामा एक जना गम्भीर घाइते भएका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार बिहान ३ बजेतिर सप्तरीको खडक नगरपालिका ११ स्थित हुलाकी राजमार्गको बनौली खण्डमा प्रदेश २–०१–००१–प.६१४६ नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई दुर्घटनामा पर्दा २ जनाको मृत्यु भएको छ ।
मृत्यु हुनेहरुमा मोटरसाइकल चालक सोही वडा निवासी २१ वर्षिय शिवेन्द्र साह र २५ वर्षिय अरबिन्द यादव रहेका छन् । मोटरसाइकलमा सवार अर्का यूवा सोही वडा निवासी २० वर्षिय सुनिल चौधरी गम्भीर घाइते भएका छन् । चौधरीको यहाँस्थित छिन्नमस्ता अस्पतालमा उपचार भइरहेको डिएसपी भुवनेश्वर साहले जानकारी दिएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस बहराइन राजपरिवारका सदस्यसहितको टोलीले सगरमाथा आरोहण गर्ने
अर्नाहातर्फ साथीको विवाहमा सहभागि हुन ३ जना चढेर जाँदै गर्दा तथा तीब्र गतिका कारण अनियन्त्रित भई सो दुर्घटना भएको प्रहरीले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । मृतक दुबैको शव पोष्टमार्टमका लागि गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा पठाई घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ ।
राजधानी संवाददाता - March 5, 2021
राजधानी समाचारदाता - March 4, 2021
बिचार लक्ष्मीविलास कोइराला - March 5, 2021
बिचार सागर पण्डित - March 5, 2021
Editor-Picks पूर्णभक्त दुवाल - March 5, 2021
काठमाडौं । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय २५ डलरले घटेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा नेपालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ११ सय ३४...
Editor-Picks राजधानी संवाददाता - March 5, 2021
नवौं नेपाल अफ्रिका फिल्म फेस्टिभलमा १८ चलचित्र
कला राजधानी संवाददाता - March 5, 2021
काठमाडौं । नवौं संस्करणको ‘नेपाल अफ्रिका फिल्म फेस्टिभल–२०२१’ (नाफ २०२१) आगामी १२० वैशाखबाट १२ वैशाखसम्म काठमाडौंमा आयोजना हुने भएको छ । यो महोत्सवका लागि...
ताप्लेजुङको दोभान बजारमा आगलागी, ४० बढी घर जले, नियन्त्रण प्रयास जारी
Editor-Picks राजधानी समाचारदाता - March 2, 2021
काठमाडौं । ताप्लेजुङको दोभान बजारमा आज आगलागी हुँदा कम्तीमा चालीस घर जलेका छन् । बिहान करिब ९ बजेदेखि सुरु भएको आगलागी नियन्त्रणका लागि प्रयास...
रोटरी र संचार जगतबीच सहकार्य आवश्यक
प्रदेश ३ राजधानी संवाददाता - March 2, 2021
ललितपुर । समाजसेवाको पर्याय मात्र होइन, रोटरी क्लबले व्यक्तित्व र नेतृत्व विकासका लागि धेरै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको रोटरी डिस्ट्रिक्ट ३२९२ नेपाल–भुटानका डिस्ट्रक गभर्नर राजीव...
Not-to-be-missed एजेन्सी - March 5, 2021
Breaking News राजधानी समाचारदाता - March 4, 2021
काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आज दिउँसो पदाधिकारी बैठक बोलाएका छन् । कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले दिएको जानकारीअनुसार सभापति देउवाले आज दिउँसो ३...
बिचार राजधानी संवाददाता - March 5, 2021
जनैपूर्णिमाको धार्मिक आस्था
विश्वनाथ खरेल - August 2, 2020
प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको दिन जनैपूर्णिमालाई श्रावणी भनिन्छ । ऋषिहरूको तर्पन गरिने दिन भएको हँुदा ऋषितर्पणी भनिन्छ । हरेक चाडवाडको आआफ्नै महŒव र...
सामाजिक सञ्जालमा कडाइ गर्दै सरकार
राजधानी समाचारदाता - February 13, 2021
काठमाडौं । सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्नेगरी सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ । सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने ध्येयसहित सरकारले सामाजिक सञ्जाल...
आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन रोक्ने सरकारको निर्णय
Uncategorized राजधानी समाचारदाता - September 22, 2020
काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन रोक्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले असोज २४ गतेका लागि तय भएको निर्वाचन...
‘अभद्र व्यवहार भएको छैन’
Not-to-be-missed राजधानी संवाददाता - August 9, 2020
काठमाडौं । नेपाल बक्सिङ संघले संघको केन्द्रीय पूर्ण कार्यसमिति बैठकमा संघका महासचिव सविन भट्टाचार्यमाथि कुनै अभद्र व्यवहार नभएको बताएका छन् । संघले शनिबार प्रेस...
कोरोनाबाट विदेशमा थप ११ जनाको निधन
प्रदेश ३ रासस - December 20, 2020
काठमाडैँ । कोभिड– १९ को सङ्क्रमणबाट विदेशमा थप ११ नेपालीको मृत्यु भएको छ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) का अनुसार विगत दुई सातामा युएईमा...
दिपकराजको गीतमा वर्षा शिवाकोटीको अभिनय
कला राजधानी समाचारदाता - February 23, 2020
काठमाडौं । माया प्रेम अनि बिरहको गीत लेख्दै आएका गीतकार एबंम निर्देशक दिपकराज पाठकको नयाँ सिर्जना ‘तिम्रो दिलको चाबी…’ बोलको गीत...
प्रदेश ३ बिमला पाण्डे - May 17, 2020
सिन्धुली । सिन्धुलीमा उच्च ज्वरो आएका २ जना महिलाहरुलाई आइसोलेसनमा भर्ना गरिएको छ । शनिबार उच्च ज्वरो आएपछि दुई जना महिलालाई आइसोलेसनमा भर्ना गरिएको...
प्रधानमन्त्रीको खुट्टा बाँधिदिएपछि कसरी काम गर्ने ? : महान्यायाधिवक्ता
प्रमुख रासस - February 2, 2021
काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले प्रतिनिधिसभा बाध्यताले विघटन गर्नुपरेको भए तापनि संविधानसम्मत भएको तर्क राखेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्वको रिट निवेदनमाथि पन्ध्रौं दिनको सुनुवाइमा...
प्रमुख रासस - March 5, 2021
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकामा यही फागुन २३ गतेबाट सञ्चालन हुने कोभिड–१९ विरुद्ध दोस्रो चरणको खोपका लागि १५ वटा केन्द्र तोकिएको छ । यस चरणमा ५५...
Breaking News राजधानी समाचारदाता - March 5, 2021
काठमाडौं । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एसिड आक्रमणमा परेकी मुस्कान खातुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला (आईडब्ल्यूओसी) पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । तेजाब हमला...
पशुपतिमा विशेष पूजा फागुन २५ देखि
प्रमुख रासस - March 3, 2021
काठमाडौं । पशुपतिनाथ मन्दिरमा कोरोना महामारीका कारण एक वर्षअघि देखि रोकिएको विशेष पूजा फागुन २५ गतेदेखि शुरु हुने भएको छ । कोरोना जोखिम कायमै...
नख्खुमा जीपको ठक्करबाट क्याम्पस हिँडेकी १९ वर्षीया छात्राको मृत्यु
Breaking News राजधानी समाचारदाता - March 3, 2021
काठमाडौं । ललितपुरको नख्खुमा क्याम्पस जाँदै गरेकी एक छात्राको आज विहान जीपको ठक्करबाट मृत्यु भएको छ । बिहान पौने ६ बजे स १ ज...
प्रदेश ३ राजधानी संवाददाता - March 5, 2021
Uncategorized राजधानी संवाददाता - March 5, 2021
अर्थ राजधानी संवाददाता - March 5, 2021
श्रीप्रसाद प्रसाई - March 3, 2021
लक्ष्मीविलास कोइराला - March 5, 2021
एजेन्सी - March 3, 2021
सातामा ६ अर्बले कारोबार घट्दा बजार पुँजीकरण ५६ अर्बले घट्यो
Editor-Picks पुजा चँदारा - March 5, 2021
काठमाडौं । यस साता नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) कारोबार रकम र बजार पुँजीकरण दुबै घटेका छन् । गत साताको तुलनामा करोबार रकम ६ अर्बले...